समाजको डरले बिवाहपुर्वको यौन पछि युवतीहरु भर्जिन बनाउछन – कसरी ? (एउटा कथा) « News of Nepal
समाजको डरले बिवाहपुर्वको यौन पछि युवतीहरु भर्जिन बनाउछन – कसरी ? (एउटा कथा)
१७ असार २०७४, शनिबार
मार्टिना (नाम परिवर्तन) निकै भाबुक देखिन्छन् । उनी आफ्नो नङ दाँतले लगातार टोकिरहेकी छिन् अनि लगातार मोबाइन चलाइरहेकी छिन् । ‘म यसलाई धोकाका रुपमा मान्छु र यसकारण निकै दुःखी छु ।’- उनले भनिन । हामी ट्युनिशियाको एक प्राइभेट क्लिनिकको चौथो तलामा छौं । जहाँ महिला रोग विज्ञहरु छन् । गुलाबी रङको वेटिङ रुममा महिलाहरु निकै धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । ट्युनिशियामा जब युवतीको विवाह हुन्छ, तबसम्म उनीहरु भर्जिन भएको विश्वास गरिन्छ । यसैकारण यहाँ भर्जिनिटी फेरि हासिल गर्नका लागि ‘हाईमन’ लगाउने कारोबार निकै फस्टाएको छ ।
मार्टिनाले नक्कली हाइमन लगाएको बताइन् । एक सानो मेडिकल प्रक्रियाबाटै महिलाको गोप्य अंगमा हाइमन जोड्ने गरिन्छ । हाइमन एक प्रकारको झिल्ली जस्तो हुन्छ, त्यसलाई चिकित्सकहरुले जोड्ने गर्छन् । हाइमनलाई पुनः जोड्नु भर्जिनिटीलाई फिर्ता ल्याएको रुपमा लिने गरिन्छ । मार्टिनाको दुई महिनापछि बिहे हुँदैछ । त्यसैले २८ बर्षीया मार्टिनालाई आफू भर्जिन नभएको चिन्ता छ । कतै श्रीमानले उनी भर्जिन भएको शंका पो गर्ने हुन कि भनेर चिन्तित देखिन्छन्, यास्मिन । ‘एक दिन गल्तीपूर्वक कुराकानीको क्रममा मैले यसको पर्दाफास नगरुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘वा मेरा श्रीमानलाई यसबारे शंका नहोस् ।’
ट्युनियसामा कतिपयको बिहे हुनासाथ डिभोर्स हुने गरेको घटना बाहिर आउन थालेको छ । त्यसको मुख्य कारण पुरुषले आफ्नी श्रीमती भर्जिन नभएको शंका गर्ने गरेको देखिएको छ । मार्टिना जन्म एक उदार परिवारमा जन्मेकी थिइन् । र केही बर्ष विदेशमा पनि बसेकी थिइन् । उनलाई डर छ कि उनका हुनेवाला जीवनसाथले उनका अतितका यौन सम्बन्धका बारेमा शंका लाग्यो भने विवाह टुट्नेछ । ‘मेरो एक पुरुषसँग अफेयर थियो मार्टिनाले भनिन्, ‘त्यतिबेला मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ कि भर्जिनिटीका विषयमा हाम्रो समाजमा कति दबाब हुने गर्छ र त्यसले कस्तो परिस्थिति ल्याउँछ ।’
‘यस्तो अवस्थामा म निकै डराएकी छु । यदि मैले आफ्नो अफेयर सम्बन्धबारे भविष्यका श्रीमानलाई भनेँ भने निश्चय नै मेरो विवाह टुट्नेछ ।’,- चिन्तित हुँदै उनले भनिन् । हाइमन लगाउन करिब ४ सय अमेरिकी डलर (४० हजार रुपैँया) तिरिन् । यो लगाउन आधा घण्टाको समय लाग्छ । फेरि हाइमन लगाउन आधा घण्टाको समय लाग्छ । यही हाइमन लगाउन मार्टिनाले केही महिनादेखि पैसा बचाएर राखेकी थिइन्, जुन उनको परिवारलाई समेत थाहा छैन् ।
मार्टिनालाई पुनः भर्जिन बनाउने प्रक्रिया एक गाइनाकोलोजिस्टले पूरा गर्नेछन्, जसको नाम हो डा. रशिद । डा. रशिदले एक हप्तामा दुईवटा यस्तो शल्यक्रिया गर्दछन् ।डा. रशिदका अनुसार, पुनः हाइमन राख्न आउनेमध्ये ९९ प्रतिशत त्यस्ता महिला हुन्छन् जो आफ्नो परिवार र आफन्तको इज्जत जाने कुरामा डराएका हुन्छन । मार्टिनाकै जस्तो बढी उमेर भएका युवतीहरुले आफूहरु भर्जिन भएको लुकाउन चाहन्छन् ।
यद्यपि, हाइमन बिभिन्न कारणले टुट्ने गर्छ, सेक्सका कारणले मात्रै हैन् । तर पनि महिलालाई गलत तरिकाले अपराधी ठहराइन्छ र उनीहरुमाथि विवाह पूर्व सेक्सको आरोप लगाइन्छ । ‘गाइनाकोलोजिस्टले हाइमनलाई पुनः राखिदिने गर्दछन् । यो कुनै अपवाद होइन । यहाँ कुनै पनि डाक्टरले यसो गर्दैनन् । म निजी रुपमा यस्तो गर्छु किनभने म ती मानिससँग सहमत छैन जसले भर्जिनिटीलाई पवित्र मान्छन् । म भन्छु कि यो सबै पुरुष प्रभुत्व हो र म यसकाविरुद्ध युद्ध जारी राख्नेछु ।’- डा. रशिदले भने ।
‘यदि मलाई विवाहपछि मेरी श्रीमती भर्जिन छैन भन्ने थाहा भए म उनलाई पुनः विश्वास गर्दिन । म यसलाई धोकाको रुपमा हेर्नेछु । म नक्कली हाइमनमा विश्वास गर्दिनँ । मलाई लाग्छ कि यसले काम गर्दैन ।’- इशेनले भने । इशेन नजिकै बसेका उनका साथीले भने ट्युनिशियाली परम्पराका कारण महिलाले प्रताडना झेल्नुपरेको बताए । ‘यो पाखण्ड मात्र हो मेरो लागि,’ उनले भने, ‘यदि पुरुषले विवाहपूर्व यौनसम्बन्ध राख्न सक्छ भने महिला भने महिलालाई मात्रै किन कठघरामा खडा गरिनुपर्ने ?
सिभिल अस्पतालमा सभामुख र सांसदहरुले खोप लगाउँदै
मलको अभावमा उत्पादन घट्ने र किसान मर्कामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौ : मन्त्री अर्याल
कांग्रेसले दाहाल-नेपाल समूहलार्ई सहयोग गर्न सक्छः..
सरकार र विप्लव नेकपाबीच ३ बुँदे..
कांग्रेसले दाहाल-नेपाल समूहलार्ई सहयोग गर्न सक्छः नेता पौडेल